Antsoy Us: +86 185 7557 3399
LED Garage mazava Series
LED IP64 katsaka mazava Series
LED High andry tokana Lamp
LED Linear andriamby Retrofit Kit
Shenzhen Youlumi Co.LTD specializes amin'ny orinasa mpamokatra entana jiro LED vokatra. No ankalazainay matihanina sy traikefa R & D ekipa, tapa-kevitra ny handresy ny zava-tsarotra ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny fizarana ny jiro dingana orinasa mpamokatra entana. Youlumi ekipa mpikambana nahatonga ny orinasa izay manosika ny fandrosoana eo amin'ny teknolojia LED. Mametraka benchmark noho ny mpifaninana ao amin'ny orinasa.
Niorina tamin'ny Jolay 2012, dia nanao ny famokarana jiro LED sy vary vokatra mazava. Tamin'ny 2013, dia soa aman-tsara ny vaovao premiered 150W sy 200W vary jiro izay nirakitra ny mpamily nandinika lalina. Ny vokatra isan-karazany ary ankehitriny dia mampitombo hatrany ahitana 250W, 300W sns modely.
Ankehitriny, ny flagship 250W bary mazava tsara supersedes 400W sy 1000W mazava niafina loharano. Tamin'ny 2014, ny fitaovana retrofitting in 80W, 100W sns Variants vokatra no nataony tao an-tsena. Ny helo avo sy ny jiro an-dalambe nahazo mpanjifa maro ny appraisals tsara.
Ny voalohany indrindra fampiharana ny vokatra dia ao amin'ny trano fanatobiana entana, toeram-pivarotana lehibe, toerana ara-barotra sy ny toe-javatra samihafa ivelan'ny trano. Ireo vokatra avy nanao safidy eo amin'ny Eoropeana sy Amerikana tsena. Ny vokatra dia afaka amin'ny fanoloana lany andro rehetra anisan'izany ny loharanom-jiro CFL, HPS, nitondra UV nanasitrana Systems sy Metal Halide globes mba manana fahefana hampihena ny fanjifana. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny hanampy ny mpanjifa amin'ny mihena ny vola lany herinaratra sy ny fanatratrarana ny enviromentally sariaka sata.
Ny orinasa teny filamatra,-tsena mifantoka, mifantoka amin'ny orinasa mpamokatra entana, afa-tsy vokatra fifaninanana. Manantena izahay fa tena mahasoa ny fiaraha-miasa sy ny fifanampiana ny fampandrosoana.
Floor3, C Building Chuangfu Industrial Zone, AiQun Road, Shiyan Town, Bao'an, Shenzhen, Sina